February | 2017 | Radio Himilo
Natiijooyinka Kulamadii Laga Cayaaray Horyaalka Dalka.
radio himilo February 28, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 94 Views
Muqdisho – Ciyaaro adag ayaa shalay laga ciyaaray horyaaalka dalka, waxaana dhacay labo kulan oo aad u xiiso badnaa. Ciyaartii adkeyd ayaa aheyd ciyaartii ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium waxa ayna dhex martay kooxaha Elman FC iyo ...
Wararkii ugu danbeeyey suuqa kala iibiga ciyaartoyda
radio himilo February 28, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 103 Views
Muqdisho – Wararkii ugu danbeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa ugu waaweyn CHELSEA Waxay hanan kartaa Bonucci Tababaraha kooxda chalsea ee Antonio Conte iyo difaaca kooxda Juventus Leonardo Bonucci ayaa laga yaabaa in ay dib u midoobaan kadib markii ...
radio himilo February 28, 2017	Features, Wararka Leave a comment 119 Views
Muqdisho – Hab-tacliimeedka dadban waxay sanadihii tagay kusoo kordheen magaalada Muqdisho. Xarumaha ama dugsiyada bixiya habka tacliinta dadban ama fudud ee loo yaqaan Koorsada oo ah koobis iyo guud-mar lagu sameynayo manhajka sanad-dugsiyeed ee loogu tala-galay in lagu qaato sanad ...
Dhageyso: Tacliinta iyo Jaceylka iyo aragtida dhalinyarada
radio himilo February 26, 2017	Features, Wararka Leave a comment 151 Views
Muqdisho – Waxay yiraahdeen jaceylku malahan xad iyo soohdin. Ma yaqaan caddaan iyo madow. Ma qoro sabool iyo tanaad. Mana ku sargo’na kuf iyo gayaan. Hayeeshe, tacliinta iyo caashaqa waa doodda ilaa hadda aan baalasheedaba la laabin ee u furan gorfeynta. ...
radio himilo February 25, 2017	Features, Wararka Leave a comment 132 Views
Muqdisho – Waxay yiraahdeen jaceylku malahan xad iyo soohdin. Maya yaqaan caddaan iyo madow. Mana qoro sabool iyo tanaad. Balse sheekada cajiibka leh ee ku saabsan sida 28-jir Induniisiya u dhashay uu jaceyl ula wadaagay haweeney ka da’weyn 54-sanadood markii ay ...
Shiinaha: Dawo loo helay haweenka la niyad-jaba furriinka
radio himilo February 25, 2017	Features, Wararka Leave a comment 108 Views
Muqdisho – Kooxda gabdho Shiinees ah ayaa dhawaantan qabsaday baraha bulshada kadib markii lasoo dhigay sawirro laga soo qaaday iyaga dhex yaalla luxudyada xabaalo dhaca duleedka degmada Chongqing City. Waxaa la shaaciyay inay ka qeyb-qaadanayeen leyli ruuxi ah oo lagu bogsiinayo ...
radio himilo February 25, 2017	Features, Wararka Leave a comment 96 Views
Muqdisho – Haweeney ku nool dalka Mexico, taas oo gacno la’aan ku dhalatay, ayaa dunida tustay inay maangal tahay in nolol raaxo leh la noolaado gacno la’aan. 39-jirta lagu magacaabo Adriana Irene Macias Hernandez oo ku nool Guadalajara ayaa jabisay rikoorka dunida ...
radio himilo February 25, 2017	Features, Wararka Leave a comment 99 Views
Muqdisho – Dhawaqa dhagihiinna kusoo dhacaya waa mid kamid ah aflaamta taxanaha ah ee lagu turjumay af-Soomaali kuwaas oo ugu badnaan habeen kasta guri walba ka daarmi kara. Waana dooqa ugu horreeya ee gabdhaheennu kala baxaan daawashada fogaan-aragyada. Sida wiilashuba ...
radio himilo February 23, 2017	Features, Wararka Leave a comment 75 Views
Muqdisho – Aad bay engeg u tahay xarunta Tsavo East National Park ee duurjoogtu ku dhan tahay gudaha Kenya. Badi ugaarta iyo dugaagtuna waxay dalanbaabi la yihiin biya la’aanta jirta waxayna u wirwiraan helidda ilo biyo laga cabo. Warka xun ayaa ...
Shaqaale nadaafad oo 37 arday sabool ah ka caawisay wax-barashada 30-kii sano ee lasoo dhaafay
radio himilo February 23, 2017	Features, Wararka Leave a comment 74 Views
Muqdisho – Zhao Yongjiu, oo ah 56-jir shaqaale nadaafadeed ah oo ku nool Shenyang, China, ayaa dhawaan ku guuleystay internet-ka kadib markii la shaaciyay in – 30-kii sanadood ee lasoo dhaafay – uu wax-barashada ka caawiyay 37 carruur aan helin cid lacagta ...